Wax-soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee ka shaqeysa Multi-function - Baili Medical
Guriga > Alaabta > Qalabka Gargaarka Degdegga ah > Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee shaqaynaysa oo badan
Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee hawl-badan qabta Macnaha guud, dhammaan qalabka badbaadin kara nolosha waqti gaaban waa qalabka gargaarka degdegga ah. Caadi ahaan waxaan nidhaahnaa qalabka gargaarka degdegga ah waxaa iska leh dareenka cidhiidhiga ah, inta badan waa qalabka caafimaadka caadiga ah ee lagama maarmaanka u ah samatabbixinta bukaannada isbitaalka. Waxaa ka mid ah defibrillators, neefsiyeyaasha fudud, kombaresarada wadnaha, hagaajinta jabka cadaadiska xun, iyo dhululubada ogsijiinta. Sariirta samatabbixinta oo kala duwan, qalabka nuugista cadaadiska taban, mashiinka caloosha si toos ah, bamka duritaanka yar-yar, bamka faleebada tirada iyo qalabka kale ee xaaladaha degdegga ah ee tubbada xiirta iyo tracheotomy. Nidaamka la socodka, qalabka oksijiinta xuubabka ka baxsan jidhka (ECMO), sifaynta peritoneal-ka iyo nidaamka sifaynta dhiigga iyo qalabka kale.
Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee ka shaqeysa Multi-function waa bac yar oo ay ku jiraan dawooyinka gargaarka degdegga ah, faashad jeermis dilay, faashado iyo wixii la mid ah, kuwaas oo loo isticmaalo xaaladaha degdegga ah marka ay dadku shil galaan. Waxaa loo qaybin karaa qaybo kala duwan iyadoo loo eegayo deegaan iyo walxaha kala duwan ee isticmaalka. Marka loo eego walxaha kala duwan ee la isticmaalo, waxa loo qaybin karaa xidhmada gargaarka degdega ah ee guriga, xidhmada gargaarka degdega ah ee dibada, xidhmada gargaarka degdega ah ee gaadhiga, xidhmada gargaarka degdega ah ee hadyada, xidhmada gargaarka degdega ah ee dhulgariir, iwm.
Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee hawl-badan leh, oo ku habboon in loo isticmaalo deegaan xun marka ay shilalka degdega ah dhacaan, aag shaqo oo gudaha ah oo macquul ah, helitaan ku habboon alaabta; Qalabku waa mid dhamaystiran oo cilmiyaysan, oo si gaar ah ugu qalabaysan ka-hortagga musiibada iyo sahayda degdega ah ee is- samatabbixinta ee ku habboon dhulgariirka, dabka iyo masiibooyinka kale ee shilalka si loo daboolo baahiyaha dhamaystiran ee daryeelka caafimaadka maalinlaha ah si loo samatabbixiyo masiibada iyo baxsashada, safarka dibadda ilaa garoonka. ilaalinta shaqada, guud ahaan ku qalabaysan biyo iyo cunto.
Waxaan haynaa kuwa ugu cusub Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee shaqaynaysa oo badan oo laga sameeyay warshadeena Shiinaha oo ah badeecadeena ugu weyn, oo noqon karta jumlo. Baili waxaa loo yaqaanaa mid ka mid ah Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee shaqaynaysa oo badan soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha caanka ah ee Shiinaha. Waxaa lagugu soo dhawaynayaa inaad iibsato Aaladda Gargaarka Degdegga ah ee shaqaynaysa oo badan la habeeyey oo wata liiskayaga qiimaha iyo xigashada. Badeecadahayagu waa shahaado CE waxayna ku jiraan kaydka macaamiisheena si ay wax uga doortaan. Waxaan si dhab ah u rajaynaynaa wada shaqayntiina.